Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Ornidazole (Dazolic) အိုနီဒဇိုးလ်
Ornidazole (Dazolic) အိုနီဒဇိုးလ်
Ornidazole 500mg Tablets (အော်နီဒါဇိုးလ်) ဟာ ပဋိဇီဝပိုးသေဆေး ဖြစ်တယ်။ (ဗက်တီးရီးယား) တွေရော (ပရိုတိုဇိုးဝါး) အကောင်တွေကိုပါ နိုင်တယ်။
1. Anaerobic infections (အမီးဘား) ပိုးဝင်ခြင်းများ၊
2. Bacterial vaginosis (ဗဂျိုင်းနား) (ဗက်တီးရီးယား) ဝင်ခြင်း၊
3. Amoebic dysentery (အမီးဘား) ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊
4. Amoebic liver abscess (အမီးဘား) အသဲပြည်တည်ခြင်း၊
5. Hepatic amoebiasis (အမီးဘား) အသဲရောင်နာဖြစ်ခြင်း၊
6. Intestinal amoebiasis အူမှာ (အမီးဘား) ပိုးဝင်ခြင်း၊
7. Giardiasis (ဂိုင်ယာဒီယေးဆစ်)၊
8. Trichomoniasis (ထရီကိုမတိုးဆစ်)၊
9. Crohn's disease (ခရုမ်း) ရောဂါတွေကိုပေးနိုင်တယ်။
10. ဆေးကိုအစာစားပြီးချိန်မှာ ရေများများနဲ့ သောက်သင့်တယ်။ ဝါးမစားပါနဲ့။
Side Effects ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ
- Headaches ခေါင်းကိုက်၊
- Drowsiness မူးဝေအိပ်ချင်၊
- Nauseous ပျို့၊
- Vomiting အန်၊
- Diarrhea ဝမ်းပျက်၊
- Insomnia အိမ်မရ၊
- Unusual tastes အရသာပျက်။
Serious side effects ဆိုးဝါး ရှာပါးတဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ
- Confusion စိတ်ရှုတ်ထွေးခြင်း၊
- Severe dizziness အပြင်းအထံခေါင်းမူးခြင်း၊
- Severe diarrhea အပြင်းအထံ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊
- Bloody stools ဝမ်းထဲသွေးပါခြင်း၊
- Numbness ထုံခြင်း၊
- Tingling sensations ကျင်ခြင်း၊
- Coordination changes အတူတွဲလုပ်ရသည်များ ပျက်ပြားခြင်း၊
- Tremors or seizures လက်-ခြေတုံခြင်း၊ တက်ခြင်း၊
- Jaundice အသားဝါဖြစ်ခြင်း။
• Anaerobic infections (အမီးဘား) ပိုးဝင်ခြင်းများ = Adults: 500mg twiceaday orally for5days. Children: 10-25 mg/kg body weight in two divided doses
• Bacterial vaginosis (ဗဂျိုင်းနား) (ဗက်တီးရီးယား) ဝင်ခြင်း =3tablets of 500rng each asasingle dose. Or one tablet of 500mg once daily for 5-7 days
• Amoebic dysentery (အမီးဘား) ဝမ်းကိုက်ရောဂါ = Adults: 1.5 gm orally onceaday for3days. Children: 40 mg/kg body weight, onceaday for3days
• Giardiasis (ဂိုင်ယာဒီယေးဆစ်) = 1.5 g, once daily for 12 days. Children: 40mg/kg body weight for2days
• Trichomoniasis (ထရီကိုမတိုးဆစ်) = 1.5 gm once orally or 500mg twiceaday for5days
Drug Interactions သတိထားရန်များ -
1. Oral anticoagulants သွေးကျဲသောက်ဆေးတွေနဲ့ တွဲမပေးရ။ သွေးယိုစေနိုင်သည်။
2. Pregnancy & Lactation ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ နို့တိုက်ချိန်မှာ သတိနဲ့သာပေးပါ။
3. Ataxia, vertigo and mental confusion ရောဂါရှိနေသူများ သတိနဲ့သာပေးပါ။